Top 6 sữa dưỡng thể Vaseline được đánh giá cao nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 6 sữa dưỡng thể Vaseline được đánh giá cao nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 6 sữa dưỡng thể Vaseline được đánh giá cao nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Akukhona nje kuphela isikhumba sobuso esidinga ukunakekelwa, kodwa zonke izindawo zomzimba kufanele zondliwe ngokucophelela. Ukwenza lokho, abesifazane abaningi beze emgqeni womkhiqizo isikhumba mhlophe ubisi lomzimba yomkhiqizo weVaseline. Ngakho-ke yini ekhetheke ngale ndlela yokunakekela isikhumba eyenza abantu besifazane bathandwe kangaka? Sicela ubhekisele ku TOP 6 best Vaseline body lotion Manje ngesihloko esingezansi.
1 Mayelana ne-Vaseline body lotion brand
2 Kungani kufanele usebenzise i-vaseline body lotion?
3 Top 6 Vaseline body lotions athandwa kakhulu abesifazane
3.1 3.1 I-Vaseline Instant Fair
3.2 3.2 Vaseline Healthy White Serum Lotion Sunscreen SPF30 PA++
3.3 3.3 Vaseline Perfect 10™ Body Lotion
3.4 3.4 I-Intensive Care™ by Vaseline
3.5 3.5 I-Vaseline Lightening Visible Fairness Lotion
3.6 3.6 Vaseline Healthy White Sunscreen Body Lotion 50X
Mayelana ne-Vaseline body lotion brand
UVaseline wumkhiqizo wezimonyo weqembu le-Unilever elasungulwa ngo-1870. Kuze kube manje, lolu hlobo lunesipiliyoni esingaphezu kweminyaka engu-150 emakethe yabathengi futhi seluthole ukubukezwa okuningi okuhle. Lona ngolunye lwemikhiqizo yezimonyo ethandwayo engxenyeni ethandwayo ethengiswa emazweni angaphezu kuka-60, kuhlanganise neVietnam.
UVaseline wumkhiqizo wezimonyo we-Unilever Group, eyasungulwa ngo-1870
Uvaseline ugxile kakhulu ekuhlinzekeni imakethe ngemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba, izinwele, iziqholo, iziqedaphunga, njll. Imikhiqizo yophawu lweVaseline ikakhulukazi iqedwe kuPetroleum Jelly (mineral oil wax) nokuhlanzeka okuqinisekisiwe.Iphephile futhi inempilo esikhumbeni sakho.
Ngemva kweminyaka eminingi yemizamo yokwakha nokuthuthukisa imakethe yaseVietnam, uVaseline ubelokhu elwela ukuqinisekisa ukuma kwawo ngenani elincomekayo lokuthengiswa kwemikhiqizo efinyelela ezigidini. Njengamanje, i-vaseline body lotion kanye nemikhiqizo yayo isatshalaliswe kabanzi ezweni lonke ngohlelo oluqinile lwezitolo zokudayisa.
Kungani kufanele usebenzise i-vaseline body lotion?
Njengamanje, imakethe yezimonyo inemikhiqizo eminingi yokunakekelwa kwesikhumba ehlinzekwa ukudayiswa. Kodwa kungenxa yalokhu okwenza abesifazane baphakamise ukwesaba mayelana nezigcobo zomzimba ezisezingeni eliphephile esikhumbeni sabo. Ungethuki ngoba uvaselina wesikhumba esibushelelezi obomvana udayiswa yonke indawo ukuze abathengi bakwazi ukuwuphatha kalula.
Ukusebenzisa njalo i-vaseline body lotion kusiza ukugcina isikhumba siqinile futhi sinempilo
Kunemibono nemibuzo eminingi Imuphi umbala kaVaseline wokugcoba umzimba omuhle? Eqinisweni, umbala ngamunye ushiwo ngumkhiqizi ngokusetshenziswa kwawo okukhethekile, yonke imikhiqizo izibophezele kwikhwalithi futhi kuye ngesikhumba somuntu ngamunye, imiphumela ikhuthazwa ngokuhlukile.
I-substance ye-Vaseline body lotion incane kakhulu, ngakho-ke nakuba iwumugqa wobisi, uma igcotshwa esikhumbeni, izozwakala njengokhilimu. Akukhona nje kuphela i-lotion yomzimba, kodwa iningi lemikhiqizo yalo mkhiqizo inento enjalo ngoba isithako esiyinhloko semigqa yokunakekelwa kwesikhumba se-Vaseline i-Petroleum, esiza ukuphulukisa ngokushesha amanxeba, ukuthambisa kanye nokwenza isikhumba sibe mhlophe.
I-vaseline body lotion iqukethe izithako ezingenabungozi njenge-Vitamin B3 ukondla isikhumba, okuwumgoqo wokuvikela isikhumba emathonyeni emvelo afana nentuthu, uthuli kanye nemisebe ye-UV. I-vaseline body lotion yenziwe ngezinhlayiya ezincane ezisiza ukunikeza umswakama futhi zondle isikhumba kusuka ekujuleni ngendlela ephumelela kakhulu, kuyilapho kuvimbela izimpawu zokuguga ezifana nama-stretch marks, imibimbi, njll.
Buka Okuningi: [Review] Ingabe i-Hatomugi body lotion ilungile? Malini?
Top 6 Vaseline body lotions athandwa kakhulu abesifazane
I-Vaseline Body Lotion Idizayinwe kahle, ilula, iphunga elimnandi iletha induduzo kwabesifazane. Nansi imikhiqizo eyisi-6 yokuthambisa kaVaseline ekhethwa ngabesifazane ukuthi bayithenge kakhulu.
3.1 I-Vaseline Instant Fair
I-Vaseline Instant Fair ingumkhiqizo owenza isikhumba sibe mhlophe owaziswa kakhulu odokotela besikhumba kanye nabathengi. Isithambiso somzimba sikakhilimu owuketshezi opinki okhanyayo omuncwa ngokushesha esikhunjeni. Uma usebenzisa, akudingekile ukuba wesabe inkinga enamafutha ngoba i-Healthy White Instant Fair izonqoba lo bubi obungenhla. Ngaphezu kwalokho, abesifazane bazozizwa bekhululekile ngokwedlulele ngephunga elimnandi, elisiza ukukhulisa ubufazi kulo lotion womzimba.
Izithako ze-Vaseline Instant Fair zifaka i-Glycerin, i-Titanium, i-Dioxide Niacinamide, zombili ezisiza ukuthambisa futhi zenze isikhumba sibe mhlophe, kanye ne-sunscreen emnene emkhiqizweni ivikela kancane isikhumba sakho emiphumeleni eyingozi yelanga. Ngaphezu kwalokho, i-Vaseline Healthy – White Instant Fair iqukethe ne-Bio-Actives ehlanganiswe nama-micro-reflective agents ukusiza ukunakekela ngisho nebala lesikhumba izikhathi ezingu-4 ngaphezu kwemikhiqizo evamile.
Intengo yesithenjwa: 75,000 VND / 200ml ibhodlela – 120,000 VND / 350ml ibhodlela.
3.2 Vaseline Healthy White Serum Lotion Sunscreen SPF30 PA++
I-Vaseline Healthy White Serum SPF30 PA++ body lotion ingenye yezigcobo zomzimba ezi-6 ezivela kuVaseline brand enamandla kakhulu okwenza mhlophe umzimba namuhla. Umkhiqizo uletha izinzuzo eziningi ezimangalisayo esikhumbeni sakho.
Isithako se-Vitamin B3 ku-lotion yomzimba sisiza ukondla isikhumba kusuka ekujuleni, kunikeza intombazane ukubukeka okukhanyayo nokunempilo ngokumelene nomthelela wezinto zangaphandle. Ngaphandle kwalokho, i-Vaseline Healthy White Serum SPF30 PA++ iqukethe nezinhlayiya ezincane ukusiza ukukhulisa umphumela wokuswakama ufike ezingeni eliphezulu kakhulu.
I-Vaseline Healthy White Serum SPF30 PA++ Body Lotion ingenye yezigcobo eziyisi-6 ezivela kumkhiqizo weVaseline.
I-Vaseline Sunscreen Lotion SPF30 iqukethe i-Petroleum Jelly essence ukuze umzimba ungene kuma-epidermis layers ngaphansi kwesikhumba. Ukusuka lapho, umonakalo esikhumbeni uzobuyiselwa ngokushesha nangempumelelo kunanini ngaphambili. Okuhle kakhulu nge-Vaseline Healthy White Serum SPF30 PA++ ukuthi inamafilimu okuvikela ilanga ukusiza ukugwema umthelela wemisebe ye-UVA ne-UVB esikhumbeni, ukuvimbela ukuguga, ukwehlisa imibimbi kuma-stretch marks emzimbeni wakho, ukubuyisela isikhumba esithambile nesithambile.
Intengo yesithenjwa: 199,000 VND/180ml ibhodlela.
Funda mayelana: [Review] I-Nivea Body Lotion ehamba phambili eyi-10 yazo zonke izinhlobo zesikhumba
3.3 Vaseline Perfect 10™ Body Lotion
I-Vaseline Perfect 10™ Body Lotion ine-lotion texture ebushelelezi. Uma uqala ukusebenzisa ubisi esikhumbeni, uzozizwa unamathele kancane, kodwa ngemva kwemizuzu embalwa, ukhilimu uzomunca ngokugcwele, unikeze isikhumba esibushelelezi nesomile.
Izithako ku-Vaseline Perfect 10™ ziphephe kakhulu futhi azilungile, zinikeza imiphumela yokunakekelwa kwesikhumba engcono kakhulu. I-Pro-Retinol ne-AHA isiza ukususa amaseli esikhumba afile ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, lezi zithako ezimbili nazo zikhuthaza ukukhiqizwa kwe-collagen, okusiza ukuvimbela nokunciphisa inqubo yokuguga kwesikhumba. Ngaphandle kwe-Pro-Retinol ne-AHA, le lotion yomzimba iphinde ibe ne-Vitamin A ukusiza ukukhanyisa ngisho nethoni yesikhumba.
I-Vaseline Healthy White Perfect 10™ iyilayini yokunakekela isikhumba esigcwele umzimba wonke ka-10-in-1. Lo mkhiqizo unikeza isikhumba sakho imiphumela emihle engu-10 njengesikhumba esilinganayo, sibe mhlophe, sivimbele ukungena emisebeni ye-UV. induna, yenza isikhumba sibe namandla. Ngesikhathi esifanayo, i-Vaseline Healthy White Perfect 10™ iphinde isize ukubuyisela ukulimala kwesikhumba, ukulwa nokuguga, ukuvuselelwa kwesikhumba; Ithambisa ngokuphumelelayo kusuka ekujuleni kwe-epidermis.
Intengo yesithenjwa: 69,000 VND/200ml ibhodlela.
3.4 I-Intensive Care™ by Vaseline
Enye yezinto ezithathwa njengezimhlophe ezigcobayo eziphuma kulolu hlobo lwezimonyo oludumile iVaseline Intensive Care™. Umkhiqizo ukhiqizwa ngezinguqulo ezimbili ezimhlophe neziphuzi. I-Vaseline Intensive Care™ iwumugqa okahle wokunakekela isikhumba lapho isimo sezulu somile, abantu bavame ukuhlala emakamelweni ane-air conditioning, …
Umphumela wokunakekelwa kwesikhumba we-Vaseline Intensive Care™ waziswa kakhulu abathengi, ikakhulukazi amantombazane anesikhumba esomile, esiphelelwe amanzi. Umkhiqizo unganikeza umswakama osuka ekujuleni uye esikhumbeni sakho ukuze ululame ngokushesha, ngenxa yekhono lawo lokuswakama amahora angama-24 ukuze usize isikhumba sakho sibe bushelelezi futhi siqine.
Ngaphezu kwalokho, umphumela wokungena ngokushesha esikhumbeni usiza ukhilimu ukuba uthathwe ngokulinganayo futhi ungabangeli umuzwa onamafutha kumsebenzisi. Akugcini lapho, i-Vaseline Intensive Care™ body lotion iphinde isebenze ukuvimbela ukuguga, ivikele isikhumba ngaphansi kokulimala okuqondile kwelanga.
Intengo yesithenjwa: 270,000 VND / ibhodlela le-225ml.
3.5 I-Vaseline Lightening Visible Fairness Lotion
I-Vaseline Lightening Visible Fairness Lotion iyilayini yokunakekela isikhumba enokhilimu ophinki okhanyayo, ongajiyeki kakhulu futhi umunca ngokushesha esikhunjeni. Igobolondo langaphandle lomkhiqizo linombala opinki we-lotus obukeka uheha kakhulu.
Lesi isikhuthazi sesikhumba esinamandla esiza ukugcwalisa izinto ezidingekayo emzimbeni, esiza isikhumba sakho somzimba sibe nempilo, sithambile futhi sibushelelezi kusuka ngaphakathi nangaphandle. Umkhiqizo utuswa kubantu abanesikhumba esomile, esithambile, esiqhekekile esimweni sezulu esomile.
I-Vaseline Lightening Visible Fairness Lotion inikeza umphumela wokunakekelwa kwesikhumba ongcono kakhulu womzimba. Umkhiqizo usiza inqubo yokuvuselela amangqamuzana ukuba yenzeke ngokushesha, ngaleyo ndlela ukulimala kokuziphilisa nokugcina ukuzinza kwesikhumba. Uma uyisebenzisa njalo, kuzosiza ukuvuselela isakhiwo sesikhumba, ukuletha ubusha nokukhanya, futhi ukuxazulula ngokuphelele isikhumba esiphukile nesomile.
Intengo yesithenjwa: 155,000 VND/75ml ibhodlela.
3.6 Vaseline Healthy White Sunscreen Body Lotion 50X
I-Vaseline Healthy White 50x yokugcoba umzimba we-sunscreen 50x inamahemuhemu abesifazane ukuthi ishesha izikhathi ezingu-50 ukwenza isikhumba sibe mhlophe kuneminye imikhiqizo evamile. I-vaseline 50x body lotion iwumkhiqizo we-Healthy White line kokubili okumhlophe nokuvikela ilanga okuvela kulo mkhiqizo.
Umkhiqizo unokuthungwa okuwuketshezi okunekhono lokunakekela nokuvikela ubuso besikhumba kuwo wonke umzimba. Uma usakhathazekile ngemithambo enamathelayo, edalulayo eyenza ulahlekelwe ubuhle lapho ugcoba i-lotion yomzimba, khona-ke i-Vaseline Healthy White 50x izoxazulula le nkinga. Ukhilimu weVaseline 50x lotion womzimba ulula, kulula ukuwugcoba futhi usheshe ufakwe esikhumbeni.
Intengo yesithenjwa: 180,000 VND / 320ml ibhodlela.
Isihloko esingenhla sabelane nawe ngemikhiqizo yokunakekela umzimba evela kumkhiqizo weVaseline. Ngethemba, ulwazi oluningiliziwe olushiwo luzokusiza ukuthi uzikhethele wena I-vaseline body lotion ukulingana okuhle kakhulu.
Cách làm nghệ tươi ngâm mật ong tại nhà | Muasalebang
Review kem dưỡng thể Paula’s Choice Resist Weightless Body Treatment With 2% BHA | Muasalebang